December 2018 – Tips for refugees
Midaasi waa su’aal ay adagtahay in laga jawaabo.
Laga yaabee, qofkasta in uu arintaasi u sameeyo si gooni ah.
Iyo in dad baddan ay u sameeyaan wakhti kasta si gooni ah.
Waxaad samayn kartaa galmo waxaadna gebi ahaanba iska saari kartaa dharka oo dhan.
Kadibna waxaad iska taataaban kartaa dharkiina hoostooda.
Dabcan kastuumooyinka waa kuwo la iska bixiyay.
Dabcan goonada ama cambuurkana waa mid kor loo qaaday.
Sidoo kale idinka ayaa dharka iska siibaya si aad galmo u samaysaan.
Marka hore dharka kore, kadibna kuwa hoose.
Ama in aad ku biloowdaan kuwa hoose una dambeysiisaan kuwa kore.
Ama marka hore idin ayaa iska baashaalaya kadibna dhammaantiinaba waxaad iska saaraysaan dharka.
Waxaad u aadi kartaan musqusha si gooni ah meesha ayaadna dharka isaga saari kartaan.
Qofkasta wuxuu leeyahay qaab u gooni ah oo uu jecelyahay in uu sidaasi u sameeyo.
Waa muhiim in aad ku faraxsantahay waxa aad samaynaysid.
Waa muhiim in aad ogtahay waxa aad u baahantahay oona ihtimaam siisid waxyaabahaasi.
Haddaba iska oggoow waxa aad u baahantahay wakhtigaasi.
U sheeg qofka kale waxa aad doonaysid.
Haddii aadan doonaynin in aad dharka iska bixisid:
Waa CAADI in aad sheegtid midaasi.
Posted on December 21, 2018 Author editorialteamCategories Mutual respect - Gegenseitigkeit
Waa wax wanaagsan in aad jacayl ku dhacday.
In aad qabtid su’aalooyin ku saabsan galmada waa mid gebi ahaanba caadi ah.
Galmadu waa wax hoosaad.
Midaasna macnaheedu waxay tahay: Waa mid ka dhaxaysa adiga iyo dadka aad ku kalsoontahay.
Waxaa dhici karta in waalidiintaada ay ka wel-welsanyihiin in qof uu ku khiyaamo ama ku dulmiyo.
Laakiin galmadu waa xaq aasaasi ah oo uu leeyahay qof walba.
Adigana waxaad xaq u leedahay in aad heshid qof kaaga jawaaba su’aalahaaga.
Ka fikir arinta: Qofkeed doonaysaa in aad arinta kala hadashid?
Wuxuu noqon karaa qof ka tirsan qoyskaaga.
Wuxuu noqon karaa qof lataliye ah.
Wuxuu noqon karaa qof iskuulka jooga.
Waxaa dhici karta in ay kaaga jawaabaan su’aalahaaga.
Laakiin sidoo kale waxaa dhici karta in aysan garanaynin jawaabaha.
Markaasi waxaad weydiin kartaa qof jooga xarunta latalinta, midkaas oo aan kaa qaadanin wax lacag ah.
Waad wici kartaa ama adiga ayaaba meesha aadi kara.
Waa kuwo aad ugu fiican ka jawaabida su’aalahaan.
Kahor inta aadan la kulmin ayaga, qoro arimaha kuugu muhiimsan.
Sidaasi waxna kuma iloobi doontid.
Halkan waxaad ka heli kartaa liis ay ku qoranyihiin xarumaha latalinta kuwaas oo ku caawin kara:
Ku dhufo jumlada guduudka ama casaanka ah “NÜTZLICHE ADRESSEN” (Cinwaano muhiim ah).
Posted on December 21, 2018 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Waa caadi in aadan hubin arintaasi.
Sababtoo ah adigu hore uma aadan samaynin galmo.
Marka ugu horaysa ma ahan mid ay u fududahay inbaddan oo dadka kamid ah.
Marka aad inbaddan samaysid galmada, waxay kuu noqonaysaa mid fudud.
Waxaad si fiican u baranaysaan qofba qofka kale jirkiisa.
Waxaad u baahantahay in aad khibrad isku leedihiin.
Marka aad is-daryeeshaan, waxaad baranaysaan qofba qofka kale jirkiisa.
Waxaad taaban kartaa xubinka taranka gabadha waxaadna oggaan kartaa meesha ay ku taalo.
Waxaad si taxadar leh ugu riixi kartaa gudaha xubinka taranka gabadha.
Saaxiibtaada waxay ayadana gacanta ku qabanaysaa xubinkaaga kacsan.
Saaxiibtaada waxay ayada nafteeda gelin kartaa xubinkaaga gudaha xubinkeeda.
Waxay wanaagsantahay in la isla hadlo inta aad samaynaysaan galmada.
Shayga ugu muhiimsan wuxuu yahay: Galmadu waa in ay noqotaa mid baashaal iyo raaxo leh.
Haddii ay saaxiibtaadu kugu dhahdo: Way i xanuunaysaa.
Waxaa khasab kugu ah in aad istaagtid.
Waxaad u baahantihiin wakhti si aad u barataan dareemihiina inta lagu guda jiro galmada.
Muddo kadib waxaad noqonaysaa lammaane wanaagsan.
Haa, waxay noqon kartaa mid baashaal ah.
Galmada u dhaxaysa nin iyo haweenay waxay noqon kartaa mid raaxo leh.
Galmada u dhaxaysa nimanka dhexdoodana waxay noqon kartaa mid baashaal ah.
Galmada u dhaxaysa dumarka dhexdoodana waxay sidoo kale noqon kartaa mid baashaal ah.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo galmo ah.
Dhammaan dadka oo dhan waxay leeyihiin “meelooyin laga kacsado”.
“Meelaha laga kacsado” waa meelooyin kamid ah jirka.
In la taabto meelahaan inta lagu guda jiro galmada waxay qofka ka dhigaysaa in uu raaxo dareemo.
Mid kamid ah meelahaasna wuxuu yahay “borostayt-ka”.
Borostayt-ka waa qayb kamid ah jirka.
Kama arki kartid banaanka.
Borostayt-ka waxaa taabanaya dhaqaaqa gudaha dabada.
Tusaale ahaan marka 2 nin ay wada samaynayaan galmada dabada ah.
Galmada dabada ah xaaladaan waxaa loola jeedaa:
In hal nin uu geliyo xubinkiisa taranka ah dabada ninka kale.
Galmada dabada ah waxay noqon kartaa mid raaxo u leh labbada ninba.
Meelaha kale ee kamid ah “meelaha laga kacsado” waxay yihiin, tusaale ahaan:
Xubinka taranka oo dhan, xiniinyaha, ibta naasaha, ama qoorta.
Marka loo taabto meelo baddan oo “meelaha laga kacsado ah” qaab raaxo ah, galmadu waxay noqonaysaa mid baashaal ama raaxo leh.
Xubinkaaga taranka ma lahan wax laf ah.
Sidaas darteeda ma dhici karto laf jabta.
Midaan ma ahan mid dhacaysa inta baddan.
Balse: Xubinkaaga taranka waxaa gaari kara dhaawac halis ah.
Marka uu qofku gaaro dhaawac midkaan oo kale ah, anaga waxaynu dhahaynaa:
Xubinka taranka wuu jabay.
Waxaa khasab kugu ah in aad si dhakhso ah ula kulantid dhakhtar.
Dhaawaca waa in si dhakhso ah loo daaweeyo.
Waxaa dhici karta in uu jeexitaan ku dhacay gudaha xubinka taranka.
Kuwaasna waa in la daaweeyaa.
Fadlan ha sugin kahor inta aadan la kulmin dhakhtarka.
Aad dhakhtar ku takhasusay cudurada kaadi mareenka.
Ama qolka xaalada deg-dega ah ee ku yaala isbitaalka.
U sheeg: Xubinkayga si xoogan ayuu dhaawac u gaaray.
Ma ahan midaan wax laga xishoodo.
Khasab kuguma ahan in aad sheegtid sida ay midaan u dhacday.
Waxay muhiim u tahay caafimaadkaaga.
Daaweyn la’aan, xubinkaaga taranka wuxuu noqon karaa mid si ebed ah u dhaawacma.
Saaxiibkayga wuxuu ii sheegay oo ah (labb, 16 sanno jir ah): In labbo gabdhood oo dhigta iskuulka ay yihiin lammaane. Marka ay samaynayaan galmo: Miyay ahaanayaan kuwo bikro ah noloshooda oo dhan?
Maya, ma ahaanayaan.
Inbaddan oo dumarka kamid ah, “waayida bikradaada” macnaheedu waxay tahay:
In galmo lala sameeyo qofkale marka ugu horaysa.
Muhiim ma ahan nooca uu yahay qofka kale.
“Samaynta galmada” ma ahan macnaheedu kaliya:
In la geliyo xubinka taranka raga xubinka taranka dumarka.
Qofka sidoo kale wuxuu galmo ku samayn karaa afkiisa ama gacmahooda.
Waxa muhiimka ah waxay tahay waxa uu qofku jecelyahay.
Muhiim ma ahan haddii qofka kale uu yahay nin ama haweenay.
Midaasna macnaheedu waxay tahay:
Gabdhahaan sidoo kale waxay waayayaan bikradooda.
Nimankana sidoo kale waxay waayayaan bikradooda.
Inbaddan oo dadka kamid ahi, midaan waa arin aad muhiim u ah.
Inbaddan, macnaheedu waxay tahay: In la noqonayo qof weyn.
Laakiin sidoo kale adiga waxaad noqonaysaa qof weyn xitaa haddii aadan galmo samaynin.
Mana ahan qofkasta oo hore u sameeyay galmo in sidaasi ku noqonayo qof weyn.
Anigu waxaan ahay gabar 14 sanno jir ah. Saaxiibadayda waxay ka hadlayeen waxyaabo ku saabsan barta-G. Maxaa lagaa midaasi? Anigana sidoo kale ma leeyahay?
“barta-G” waa meel ka mid ah gudaha jirka dumarka iyo gabdhaha.
Ma ahan dhammaan gabdhaha iyo dumarka oo dhan kuwo leh bartaasi.
Waxay ku xirantahay jirkooda.
Bartaasi waxay ku taalaa gudaha xubinka taranka dumarka.
Waxay ku taalaa dhinaca caloosha, tooska, dusha ah.
Mararka qaar waxay si toos ah ugu taalaa gadaasha godka xubinka taranka.
Mararka qaar waxay kusii jirtaa gudaha.
Mararka qaar waxay u egtahay in ay adagtahay.
Waxay lahaan kartaa qiyaaso kala duwan.
Marka “barta-G” la duugo ama la salaaxo:
Midaan dadka qaar waxay ku dareemaan raaxo.
Dadka qaar sidaan ayay ku noqdaan kuwo aad u kacsan.
Qaarna maba dareemaan waxna gebi ahaanba.
Intaas oo dhan waa wax caadi ah!
Waxa ugu wanaagsan ee ay tahay in la sameeyo: Oggoow jirkaaga.
Barro waxa aad ku dareentid raaxo.
Qofkasta waa mid ay ku kala duwanyihiin.
Marka ay haweenaydu samayso galmo marka ugu horaysa: Miyay waynaysaa wax ka baddan hal litir oo dhiig ah?
Maya, inta baddan haweenaydu ma weynayso intaas oo dhiig ah inta lagu guda jiro samaynta galmadeeda ugu horaysa.
Galmada su’aashaan laga yaabee in macnaheedu tahay: Galmada la isla sameeyo.
Midaasna macnaheedu waxay tahay: Wax Xubinka taranka ee raga oo la geliyo xubinka taranka dumarka.
Qaar kamid ah dumarka, bikrada waxay jeexantaa inta lagu guda jiro galmadooda “marka ugu horaysa”.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa waxa midaasi loola jeedo: https://refu-tips.de/en/i-14-year-old-had-my-period-last-week-i-used-a-tampon-and-i-suddenly-started-bleeding-heavily-i-am-afraid-i-may-have-damaged-my-hymen-what-can-i-do-now/
Qaar kamid ah dumarka, derbiyada xubinka taranka waxaa dhaawac gaarsiinaya xubinka taranka raga.
Midaasna macnaheedu waxay tahay: In xubinka taranka raga uu gaysanayo jeexitaan yar oo ku dhaca xubinka taranka dumarka.
Gudaha xubinka taranka dumarka waxaa loola jeedaa: Gudaha jirka.
Ku dhowaadkii nus kamid ah dhammaan dumarka oo dhan kama yimaado wax dhiig ah inta lagu guda jiro galmadooda “marka ugu horaysa”.
Marka uu dhiig ka imaanayo haweenayda:
Inta baddan, wuxuu noqonayaa kaliya dhibcooyin yar.
Midaan inta baddan ma ahan wax xun.
Dhaawacyada yar ayaga ayaaba iskooda u caafimaada.
Mararka qaar dhibcooyin yar oo xoogaa baddan ayaa imaanaya dhowr maalmood gudahooda.
Midaasna sidoo kale ma ahan mid xun.
Haddii uu jiro dhiig baddan:
Markaasi haweenaydu waa in ay la kulantaa dhakhtar.
Macalinkayga jooga iskuulka wuxuu i dhahayaa: Waxaad u baahantahay jacayl iyo isku soo dhowaansho si aad galmo qof ula samaysid. Muxuu yahay: Jacaylka iyo isku dhowaanshaha? Halkuuna xiriir kala leelayahay galmada la samaynayo?
Jacaylka iyo isku dhowaanshaha waa erey ay adagtahay in la micneeyo.
Waxaa laga wadaa: In aad qofka ugu kalsoontahay si aad ah.
Iyo in sidoo kale qofkaasi kugu kalsoonyahay.
Marna kuma dareemaysid xishood iyo yax-yax marka aad qofkaasi la joogtid.
Marka labadiina aad keli isla tihiin, “jacaylka iyo isku soo dhowaanshaha” wuxuu noqonayaa mid sii kobca.
Marka labbo qof ay isjecelyihiin, midaas macnaheedu waxay tahay:
In ay isku dhowyihiin.
Waxay iska fiiriyaan indhaha.
Waxay iskula hadlaan si hoos ah iyo cod macaan.
Way istaabtaan dabcan wayna is-daryeelaan.
Mararka qaar, labbada qofba waxay dareemaan rabitaan ah in ay isla sameeyaan galmo.
Laakiin midaasi ma ahan mid marwalba dhacaysa.
Mararka qaar hal qof ayaa doonaya kaliya in kasha la geliyo.
Midaasna macnaheedu waxay tahay: Qofkaasi waa mid faraxsan mana doonayo in uu wax kale sameeyo.
Muhiim ah: Labbada qofba waxay sameeyaan waxa ay doonayaan in ay sameeyaan.
Posted on December 20, 2018 Author editorialteamCategories Love - Liebe
Xusuusin muhiim ah: Ma jiri doonaan qoraalo kale oo cusub
Illaa iyo hadda, waxaynu inta baddan ku qornay qoraalo cusub boggan.
Waxaynu ka hadalnay mowduucyo aad u baddan.
Waxaynu ku rajo weynahay in ay mowduucyadaasi ahaayeen kuwo aad jeclaatay.
Waynu ku faraxsanahay in aad soo booqatay boggeena!
Laakiin laga bilaabo Janaayo 2019, masoo qori doono qoraalo kale oo cusub.
Inkastoo Bogga www.refu-tips.de weli uu shaqayn doono.
Midaasna macnaheedu waxay tahay: Weli waxaad awoodaa in aad akhrisid qoraalada.
Waxaa laga yaabaa in aad weli qabtid qaar su’aalooyin ah kuwaas oo aanan laga jawaabin.
Dabcan waxaad weydiin kartaa qof weyn oo aad garanaysid.
Dabcan qoraalada ku qoran boggaan www.refu-tips.de waxay ku caawin doonaan marka aad u baahatid.
Sidoo kale waxaad aadi kartaa xarun latalin ah.
Waxaa jira xarumo latalin ah oo la aado marka aad la kulmaysid rabshad ama dhibaato.
Waxaa kaloo jira xarumo latalin ah oo la weydiiyo su’aalaha ku saabsan galmada iyo jirkaaga.
Waxaad ka heli kartaa xarumahan latalinta ah halkan: https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.htmlKu qor magaaladaada hoosta “Postal Code/Town…” “Lambarka Boostada/Magaalada…”.
Hoosta “All offers of assistance“ “Dhammaan bandhigyada caawimaada“ waxaad ku sheegi kartaa da’daada, tusaale ahaan.
Kadibna ku dhufo dusha “Search” “Raadi”.
Halkaasna waxaad ka heli doontaa qof ku caawinaya.
Posted on December 20, 2018 Author editorialteamCategories Basics